Boqor Cismaan Maxamuud Buur-Madow oo maanta lagu xiray Hargaysa – Radio Daljir
Boqor Cismaan Maxamuud Buur-Madow oo maanta lagu xiray Hargaysa
Maarso 15, 2012 12:00 b 0
Hargaysa, Mar 15- Boqor Cismaan Maxamuud Buur-madow oo ka mid ah hogaamiye dhaqameedka waawayn ee deegaanada Soomaaliland ayaa maanta laga xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargaysa, isagoo xiligaasi ka yimid dalka Imaaraatka Carabta.
Wasiir kuxigeenka Arrimaha Gudaha Somaliland Cismaan Garaad Soofe ayaa ku tilmaamay sababaha loo xiray Boqor Buur-madow inay tahay, isagoo waday falal ka dhan ah Ammaanka, isla markaana arrimo kasoo horjeeday Qaranimada Somaliland ka waday dibedda.
Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah hogaamiye dhaqameedka Somaliland ayaa inta badan looga bartay inuu ka hadlo siyaasadda deegaanada uu kasoo jeedo ee Somaliland.
Boqor Cismaan Buur-madow ayaa marar badan eedeyn kulul saxaafadda u mariyay madaxwaynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, waxaana xilliga la xirayay oo uu kasoo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargaysa soo dhoweynayay dadwayne iyo salaadiin badan oo kasoo jeeda deegaanada Somaliland.
Qaar ka mid ah cuqaasha ka qaybqaadanaysa soo dhoweynta boqor Buur-madow ayaa cambaareeyay xariga Boqor Buur-madow.
Soohdinta Ethiopia & Eritrea oo dhiillo colaadeed ka taagan tahay, kaddib weerarkii shalay.
Baahin: Arbaca, Mar 14, Axmed M. Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Qarax khasaare lixaad leh gaystay oo ka dhacay madaxtooyada Villa Somaliya; M/weyne Faroole oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee laba ardaa oo hore ugu dagaalamay gobolka Karkaar; Dr. C/llahi Cali Warsame oo guddoonsiiyey cisbitaalka guud ee Dhahar, Haylaan agab caafimaad; Khuburo sheegtay in shidaalka Puntland laga dhaxli karo dhaqaale lixaad leh haddii si mudan loo maareeyo.